Uthando ngobudlelwane | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Emva kwexesha, uthando luya kunqumla
Bobabini abalingani banesidingo sokuthandana
Imizimba emincinci kunye nezipho zinokukwenza okuninzi
Ngaba i-romance ingakwazi kwakhona?
Isidlo sokuthanda kunye kunye
Ungavumeli ukuba i-romance ilale kwakhona
Ngokukodwa xa ubudlelwane buhlala iminyaka emininzi, ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba i-romance ekubambisaneni iyancipha. Oku kuyinto eqhelekileyo, kodwa isibini sinokwenza okuthile malunga nayo, kuba kunjalo kubalulekile ukuba ulwalamano lugcinwe kubuhlobo. Ukuze le projekthi iphumelele, kubaluleke kakhulu ukuba bobabini abalingani babonisa ukuzinikela kunye nokuthanda ukubuyisela umtshato kwimphambili.
Ukuvuselela uthando lomtshato
Emva koko, ubudlelwane buhlala lubandakanya abantu ababini. Ngoku, ngokuqinisekileyo, umbuzo uvela malunga nendlela ulwalamano olunokuthi lube yinxalenye yobomi bemihla ngemihla kwakhona. Kukho iindlela ezininzi apho ubomi bomtshato kunye nolwalamano lunokufezekiswa.
Umbhangqwana oselula ufumana isidlo sothando
Ngokuqhelekileyo, akukho nto imfuneko ukubandakanya uthando phakathi kwentsebenziswano, kuba neminxeba encinci inokunceda oku.
Uthando oluthile kufuneka luhlale lukhona, kuba isibini sinokuzuza kwi-romantic atmosphere. Ngenxa yoko, kunengqiqo ukuqinisekisa ukuba uthando lubuyela ebuhlotsheni kwaye luzisa abahlobo kunye. Ukutya kunye okanye ukunika isipho esincinane kumlingane kunceda ukugcina umtshato usaphila.
Nokuba umsebenzi wokuzilibazisa olwabelwanayo unokuqinisekisa ukuba ukusondela kumlingane kubonwa njengento efanelekileyo. Ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukwenza izenzo zothando ngethuba elide, kodwa umgudu udla ngokufanelekileyo, njengoko ubudlelwane obugcwele ulwalamano lunokubangela ubomi obonwabileyo bobabini abalingani. Kodwa kutheni i-romantic atmosphere iyancipha kwezinye iimeko?
Ngaphandle kokuba kuthatyathwe amanyathelo amanyathelo afanelekileyo, kunokwenzeka ukuba intsingiselo yothando phakathi kobudlelwane buhlala phezu kwexesha. Ekuqaleni kolwalamano, inzala kumlingani kakhulu, kwaye ngokufanelekileyo, iinzame ezininzi zenziwa ukuze zanelise iqabane kwaye zimenze avuye.
Kodwa ngezinye iinkalo kubudlelwane kuza ixesha apho ubomi bomhla ngemihla kuqala. Ngamanye amaxesha uthando lomlingane luthatyathwa ngokungenanto, kwaye iinzame ezazisetyenziselwa ingongoma ebalulekileyo kulwalamano ekugqibeleni ziba ngaphantsi. Ngaphandle kokuthandana, kusemvelo ukuba ubomi bemihla ngemihla buya kuzuza phezulu kwaye uthando lomtshato luba lufutshane.
Ngaphandle kwintsebenziswano esandul 'ukutsha, kunokuthi kwenzeke ukuba u-romance unciphise ngokukhawuleza.
Ngokuqinisekileyo, kuyenza ingqiqo ukukhusela oku. Kukho iindlela ezininzi zokukhusela ubudlelwane nokulahlekelwa yintando. Uthando lufanele luhlale luhlala kwisihloko esinobudlelwane. Nangona kunjalo, akukodwa nje omnye wamaqabane anganikela ngemithwalo yothando. Kunoko, kufanele kube yintlalontle yamabini amaqabane ukuba athatyathelwe ngothando.
Ukuthandana kwintsebenziswano ayifuni ngokwayo. Bobabini amaqabane alamano xa kufikelele ekugcineni imizwa yothando. Xa bobabini abalingani bezama ukwenza enye iqabane livuyiswe, kulula kakhulu ukudala ubomi obusondeza imihla ngemihla obunokubangela ukwaneliseka kubuhlobo.
Ngokusetyenziswa kwamabini amaqabane, ulwalamano lunokwenziwa luhluke kakhulu, kuba kunjalo, umntu ngamnye unengcamango eyahlukileyo yokuthandana. Wonke umntu uziva ezinye izinto kunokuthandana kwaye yintoni kutheni abantu abatshatileyo bacinga ukucinga malunga nokuba yintoni iqabane elithandayo. Ngobudlelwane obuye beqhubeka ixesha elithile, iqabane liye lafumana ukwazi kakuhle kakuhle kwaye liyazi izinto ezithandayo.
Oku kwenza kube lula ukulungiselela into ebhenkisayo kumlingani kwaye yandisa amathuba okuba umzamo uza kubonwa njengesenzo sokuthandana. Ukuba bobabini abalingani benza umsebenzi wobudlelwane kwaye benze konke okusemandleni abo ukugcina okanye ukuvuselela i-romance, amathuba okufeza loo njongo mkhulu kakhulu kunokuba ngaba elinye iqabane lilandela loo njongo. Sekuncinane ngeentshukumo ezincinci isiqalo esithembisayo singenziwa.
Nangona isenzo esincinci sinokubonisa indlela yokuthanda ngayo ubudlelwane. Ngokomzekelo, akuthathi umgudu omkhulu ukuthenga isiqhamo seentyatyambo emva komsebenzi kwaye ubazise kumlingane wakho. Abantu abaninzi bayavuya xa befumana iintyatyambo njengesipho.
Ezinye izipho ezingalindelekanga zingakholisa umlingane. Emva kwakho konke, ukupha izipho ebubudlelwaneni abukho nje kuphela kwiintsuku ezifana neKrisimesi, Usuku lwe-Valentine okanye usuku lokuzalwa. Isipho, esenziwa ngokungalindelekanga, kaninzi sinikeza uvuyo olungakumbi, njengezipho, elilindelekileyo njengelinye iqabane kwieholide zikawonke-yeewe kunye nokuba phantse njengento.
Ngako oko, izipho ezinjalo zingenza iqabane livuyiswe. Akunandaba nokuba lukhulu kangakanani okanye lubiza kakhulu okwangoku. Ibala isenzo, kuba sikwenza kucace ukuba kusekhona iimvakalelo ezinamandla kumlingane. Nangona kunjalo, izipho ezothusayo zolu hlobo akufanele zenziwe imihla ngemihla, ngaphandle koko ziza kuba yinto efanelekileyo ngokukhawuleza. Izipho ezincinci kufuneka zigcine inkcukacha zazo ukuze ziqhubeke nokufaka isandla ekugcineni ulwalamano lobuhlobo.
Namazwi omthandayo, atyunjwe okanye atshwankathelwe kwincwadi yokuthandana, yindlela enhle yokubonisa iqabane, ukuba iimvakalelo zivakalelwa njani. Ukuziphatha okuncinci kunye nezipho kunokunceda ukugcina umtshato uphila okanye uvuselele. Kodwa kutheni i-romance ibaluleke kakhulu kubambiswano?
Uthando ngolwalamano lubalulekile
Ngokuthandana komzimba okanye ukuziphatha okuthandwayo kubonisa umntu okhathalela lakhe iqabane. Ngokuqhelekileyo, abantu bayakulibala ukuqonda oko basenayo. Ulwalamano oluhle lufanele luhlale lugcinwa ukuze ulwalamano olubambiswano lulahleke.
Ulwalamano oluthandana lunokubanika amaqabane amnandi kakhulu kunye nexesha elihle
Ngoko yinto entle ukuba abo babini baqabane bazama ukugcina imizwa yothando phakathi kwentsebenziswano. Ukubonga akubonakali. Ezi zinto ziquka ubuchule kunye nobuchule, kuba kunjalo, ukuthandana kwemithwalo yothando kufanele kube yinto eyahlukileyo, ukwenzela ukuthintela ukuba bangabi nantoni. Ukuba uthando, nangona iinzame zamaqabane, kodwa ngokukhawuleza linyamalale ebudlelwaneni, ngoko ke kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba ubuya.
Nangona i-romantic mood iyanyamalala ngokubambisana, akuthethi ukuba ilahlekile ngokupheleleyo kwaye ngonaphakade. Kunoko, kukho ithuba lokuqinisekisa ukuba ubuhlobo bubuyela kubuhlobo kunye mhlawumbi lunamandla ngakumbi kunaphambili.
Izihlandlo zobubele ekhaya
Kwezinye iimeko kunokuba nzima kunzima ukuvuselela i-romance, kodwa kwiimeko ezininzi kufanelekile umzamo, kuba intsebenziswano ezaliswe ngothando yinto enkulu kubo bobabini abalingani. Kodwa ngubani ngokwenene onothando? Abafazi okanye amadoda?
Ngaba ngabafazi nabasetyhini bafana?
Kwenzeki ukutsho ukuba ngaba besetyhini okanye amadoda anothando, kuba ngamnye umntu uyayiqonda into enye ngekota yothando. Bobabini abasetyhini kunye nabesilisa banokukwazi ukuthandana. Ulwalamano luya kunceda ukuba bobabini amaqabane abonelela ngothando oluncinane kubambiswano kwaye ngaloo ndlela ba khuthaze ukuhlala bexhamle. Ngoko abafazi kunye namadoda banokulingana ngokulinganayo. Kodwa kwenzeka njani ukuba isibini sitshatile ukuchitha ubusuku bothando kunye nendawo efanelekileyo?
Umsebenzi oqhelekileyo, onokuyithandana kakhulu, uyidla yokutya. Ngokutya kwivenkile yokutyela, isibini asinakukwazi ukulungiselela ukutya kwabo, kwaye kunoko kunokugxila ekuxoxeni.
Isidlo kwindawo yokutyela efanelekileyo ithatyathwa kakhulu njengelungiselelo lothando lwexesha lokuzonwabisa. Ngobusuku obumnandi, isi sibini sinethuba lokubambisana kwakhona ukuqinisa imizwa yabo yothando. Ukuphela kokutya kunye kunye nevenkile yokudlela kungakwandisa ubuhlobo buhlobo. Iimangalelo nazo zifanelekile ukufezekisa le njongo.
Yintoni umntu kufuneka acingisise phantsi kokumangalisa?
Ukumangaliswa yothando kunokubukeka kuhluke kakhulu. Ngokomzekelo, kunokwenzeka ukucwangcisa ubusuku obunothando uze ubeke kwisenzo ukuze unike umlingane wakho ukuzonwabisa ngale ndlela. Nangona kusihlwa ekhaya lakho kunokusetyenziswa ukudala imvakalelo yothando.
Jabulela uthando ekhaya lakho
Umculo omncinane, i-sofa ekhululekile, i-movie yothando kunye ne-candlelight yothando. Nangona ngoncedo lwezi zinto ezincinci, kukho ithuba lokuchitha ubusuku bothando, enokubangela ukuba isibini sinokuzonwabisa. Akukufuneki ukuba ushiye ikhaya lakho ngokukhawuleza ukuba izilungiso zokuhlwa zigqityiwe.
Zamaxesha omtshato kunye neqabane lakho
Ngobusuku obusondayo kwi-sofa kunokubanomdla kakhulu. Ewe, zikho ezinye iindlela ezinokukunceda ukugcina uthando ngokubambisana. Ababini abathanda ukuchitha ixesha labo lokuzikhethela banokubamba iqela kwaye bajonge i-hobby, apho bobabini abalingani banokuzibandakanya kunye.
Ngokuqinisekileyo, kucetyiswa ukuba uhlale udibanisa uthando kunye nobomi bemihla ngemihla. Ngokomzekelo, amaqabane angabandakanyeka omnye nomnye ukubonisa ukuba banomdla kwizinto zokuzilibazisa zeqabane. Ngokwabelana ngeminqweno, iibini zinezithuba zokuchitha ixesha labo elikhululekile kunye kunye.
Ukongezelela, kunokwenzeka ukuba ufune umdlalo oqhelekileyo apho abalingani bobabini banalo uvuyo, kuba emva koko, kukho imisebenzi yokuzilibazisa ethathwa njengothando. Ngokomzekelo, isibini sinokuthatha inkambo yokudanisa kunye nokuphucula izakhono zabo zokudansa, ngoko-ke ubeke ngobuchule imidaniso esanda kufundela kumgangatho wokudanisa.
Ukuzilibazisa okwabelwanayo kunokunceda ukwandisa ulwalamano kulwalamano. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba ubonise iqabane elincomekayo kuye. Xa sele ikwazi ukubuyisela i-romance ebuhlotsheni, bobabini amaqabane kufuneka aqinisekise ukuba aphinde alele.
Naliphi na isibini esithile esake safumana ukunciphisa ubudlelwane phakathi kwabo nolwalamano uyazi ukuba ukubuyisana ngomtshato kubambiswano kunokuba nzima kakhulu. Ngenxa yoko, kunengqiqo ukuqinisekisa ukuba imvakalelo yothando ayifuni ukulala kwakhona. I-Romanticism yinto ebaluleke kakhulu kulo lonke ubudlelwane. Yingakho akufanele alahleke kuyo nayiphi na intsebenziswano.
Nokuba imiqondiso encinci yothando ingabangela ukuba ulwalamano olusenyongweni lugcinwe. Ukuthetha amazwi amnandi okanye amazwi omphefumlo akuyi kuba nzima kwaye iqabane liyakulixabisa. Ukutyelela kwindawo yokutyela yokutyela okanye ukuhlwa ngokucocekileyo ekhaya kwindlela ezininzi zokuchitha ixesha kunye neqabane lakho kunye nencoko ethile, kuba kunjalo, ingxoxo ebanzi ubudlelwane kubalulekile. Sekunokwenzeka ukuba unomgudu omncinci wokuthintela ulwalamano lokulala ebudlelwaneni.
Umbhalo weFairytale Abazalwana uGrimm - I-Puss eBhoots
Umbhalo weFairytale uHans Christian Andersen - I ...
Ipulazi langaphandle kunye nosapho